Kuthiwani uma ama-Blogger eqhubeka no-Strike? | Martech Zone
Uma ngibhala okuthunyelwe kanjena, ngizwa sengathi ngiyaqiniseka ukuthukuthela i- -Google Amandla-lokho. Ikhono lebhulogi lami 'lokutholakala' lingukhiye empumelelweni yalo. Eqinisweni, ngaphezu kwesigamu sezivakashi zami zivela ezinjinini zokusesha nsuku zonke, iningi livela kuMama Google. Ngisebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi ngibeka ukhaphethi obomvu weGoogle ngayo yonke into ebabazekayo nezimo ezibenza bamoyizele kimi.
I-Google ibeke phansi i-gauntlet abantu abaningi ngesijeziso se-'linked links ' ngaphakathi kokuqukethwe kwabo. Abanye baye baba njalo uphoqeleke ukuthi abhale futhi akhangise incwadi yokuzinikela.
Kepha sengikhathele yiyo. Ungangizwa kabi, ngisayesaba kakhulu iGoogle futhi ngisebenzisa izinhlelo zabo zokusebenza nsuku zonke. Bayinkampani engakholeki futhi ngiyajabula ukuthi ukuba khona kwabo kwenza abanye abafana abakhulu bachame amabhulukwe abo. Esinye sezizathu zokuthi ngiyithande i-Intanethi kungenxa yokuthi iyalinganisa.
I-Google yenza malini ngale Bhulogi?
Ngibhale ngaphezulu kokuthunyelwe okungu-1,000 kule bhulogi futhi nginezivakashi ezingaba ngu-500 ngosuku ezivela kwaGoogle. Ake sithi, ngenxa nje yengxabano, ukuthi iGoogle yenza cishe amasenti ayi-10 kanye njalo ekuseshweni okuyishumi. Ngakho-ke ukuseshwa okungu-10 engikutholile, bekukhona ukusesha okungu-500 isixhumanisi esikhokhelwayo sichofozwe, okulingana ne- $ 50. Ukwenza okulungile ku-Google, ngingu-5.00 kuphela emiphumeleni eyi-1 ekhasini, ngakho-ke ake sithi ngisiza ukufaka amasenti angama-10 emgqeni wansuku zonke weGoogle. Ekupheleni konyaka, mhlawumbe ngisize iGoogle ukwenza $ 50.
Ngiyabona ukuthi lezi yizibalo eziyindida, kepha iphuzu lami yilokhu… sibhala okuqukethwe okukhomba kahle iGoogle… futhi iGoogle iyakwazi ukuthengisa izixhumanisi ezikhokhelwe ngokusekelwe kulokho okuqukethwe. I-Google yenza imali ngekhono lethu lokubhala okuqukethwe okuhle nenkomba kahle, kepha asivunyelwe ukusebenzisa lokho okuqukethwe senzela abanye. Okwenza isiza sami sikhange kubakhangisi akuyona nje ukufunda, futhi nokubekwa kwe-Injini Yokusesha. I-Google isho ngokusobala ukuthi bangabanikazi bethu, hhayi thina, noma ngabe yithina esenze wonke umsebenzi onzima ukufika lapho!
Izinkampani Zakwa-Google Killing Scavenging
Izinkampani zifana PayPerPost Kuzoqhutshwa ngaphansi, nabanye abafana Izikhangiso Zesixhumanisi Sombhalo baphoqeleke ukuthi baye ngaphansi komhlaba. I-Google isiqalile impi futhi ikulungele ngokuphelele ukuyilwa nathi sonke ngoba kungenzeka sithinte isisekelo sabo.
Kepha asizanga yini ukusiza ukushayela lokho? Ngicabanga ukuthi senzile! Ama-blogs angama-75,000,000 ku-Intanethi aqhuba i-TON yokuqukethwe okumnandi emnyango weGoogle. Esikhundleni sokuthi silindele ukubuyiselwa okuthile ku-Google, sicela futhi sithandazele ukuthi basikhombe kahle futhi kaningi.
Uhlelo LweDesimal Decimal
I-Google etshela ama-blogger ukuthi yini abangayenza nabangeke bayenze ngamabhulogi abo izofana ne-Dewey Decimal System etshela ababhali ukuthi bangakwazi ini futhi bangakwazi yini ukubhala ezincwadini zabo.
I-Google ishaya ngamablogger ambalwa akhokhe izixhumanisi kuyindlela eyaziwayo esetshenziswa kakhulu ngabushiqela nabaphathi bezigqila. Khipha abaphikisi abambalwa emarenki ubanikeze isiswebhu esihle… futhi wonke umuntu uzoqhubeka nokusebenza futhi avale umlomo.
Dewey to Author, “Umuntu wakhokhela ukubalulwa encwadini yakho? Uxolo Mnumzane Umbhali, sikudonsela enkombeni. Uma labo bantu befuna ukuqashelwa, batshele ukuthi basikhokhele bese sibanikeza indawo abayidingayo. ”
Umbhali, "Ngakho-ke kufanele ngenze kanjani imali?"
UDewey, "Yebo, ngokuba kuhlu lwethu kuzobe uthola abafundi abaningi kakhulu."
Umbhali, "Linda, lokho ngeke kukusize ugcine ukuhlukaniswa okungcono okuzoheha abafundi abaningi futhi, ngenxa yalokho, uthengise ukubekwa komkhiqizo wakho okuningi?"
UDewey uyahleka, “Impela intando! Kodwa uma ungasilaleli, akekho ozobe efunda incwadi yakho. ”
Angisho ukuthi, iGoogle ukweleta mina. Ngikholelwa nje ukuthi lesi ngesinye isibonelo esihle senkampani ezama ubuvila ukuvikela umthombo oyinhloko wemali ngokushaya umfana omncane. Esikhundleni sokuthuthukisa izindlela ezingcono zokuhlaziya idatha yezingqikithi nokuhlukanisa izixhumanisi ezikhokhelwayo ngokuqhathanisa nezixhumanisi eziphilayo, iGoogle ithatha umgwaqo olula.
Nanku umbuzo, uma singaya ku- “On Strike”? Kuthiwani uma amabhulogi angama-75,000,000 anquma ukuphonsa ifayili lamarobhothi futhi ayeke iGoogle ukuthi ingabakhombisi… bonke! Yini iGoogle ezosala nayo ngaleso sikhathi? Bazosala ngokukhishwa kwabezindaba namawebhusayithi ezinkampani. Ekupheleni kosuku, akuzona lezo zixhumanisi ezikhokhelwayo? I-Google ngabe ikuphi ngaphandle kwethu?
Ngiyazi ukuthi bengingaba kuphi ngaphandle kweGoogle, ngakho-ke ngizoba yisisebenzi esihle futhi ngilandele imithetho.
Akudingeki ngiyithande imithetho, noma kunjalo.
Tags: ukuqapha geosocializibalo ezithonyamultidomainumshicileliukuhlaziywa kwemizwaIsinciphisiukuhlanganiswa kwe-crm yomphakathianalytics media socialukuqapha ividiyoukuhlaziywa kwegciwane
Nov 24, 2007 ngo-12: 43 AM
lokhu kungikhumbuza ngeposi engilibhale ngelinye ilanga
yi-sandbox yabo futhi kuze kufike enye ene-sandbox engcono… qagela kahle ukuthi kufanele sidlale ngemithetho ye-google
Nov 24, 2007 ngo-8: 27 AM
Ngicabanga ukuthi uma uncike esimweni sakho senkomba ukushayela ithrafikhi ngendlela yakho ukuze ukwazi ukwenza impunzi kungakuhle kakhulu ukudlala umdlalo weGoogle. Noma-ke, njengoba ushilo, faka ikhodi ethile etshela amarobhothi e-google ukuthi ahambe.
Ukusabela kwami ​​kokuqala kwaba nje… kungani ungabhali okuqukethwe okungcono ukuze abantu bakuthole kumfundi wakho wokuphakelayo? Angikaze ngixoxe futhi ngithole ibhulogi yakho kepha ngiyibonile kukhulunywa ngayo kubhulogi lothile othile engilithandayo futhi ngalifaka kumfundi wami.
Enye indlela esheshayo engikwazi ngayo ukushayela okuqukethwe ukubhala kabi ngento ethile. 😉 Ngaso sonke isikhathi ngithola ama-10x omgwaqo lapho ngibhula okuthile ngokungafani nokubhala okuqukethwe kwekhwalithi ka- "B".